Sararan adeemsa walfaannee deetaa wajjiin halluu wal fakkataa qaba. Amala sarara jijjiiruuf, Sarara adeemsa fili itti fufuun fili Dhangii - Amala Wanta - Sarara.
Herregiin sarara adeemsa kan inni qabbattu deetaa lammee fi gatii kan gadiiti:
Deetaa kee akkaata knan gadiiti muuxata;galragalcha deetaa issa durtii garii deetaa issa garagalchaa irrati muuxatau.
Ulaagaa kana dalaga herregduu fayyadamuun akkataa kanan gadiiti herrguu dandeesa.
Sorooroo dadhabbii qixxaatoo
Kana Dadhabbii sorooroo qixxaatoo faana bu'ii y=m*x+b.
m = SLOOPII(Deetaa_Y;Deetaa_X)
b = INTEERCEPTII(Deetaa_Y ;Deetaa_X)
Hubbaanno fuldurre heereguuf kanan fayyadamii
a = SLOOPII(Deetaa_Y;LN(Deetaa_X))
b = INTEERCEPTII(Deetaa_Y ;LN(Deetaa_X))
Sorooroo dadhabbii expoonentialii qixxaatoo
Qonyoo dadhabbii exponeenshaalii fi sorooroon ilaallata muuxatatu bakka bua'a. Qonyoon waltaasisi gaari sorooroo ilaallata wajiin wal fakkata ta'e bu'aan issa akkasumman hiikaama.
a = SLOOPEII(LN(Deetaa_Y);Deetaa_X)
Jijjiiramaan garra garrumma lammataa akkataa kana heeregama:
m = EXP(SLOOPEII(LN(Deetaa_Y);Deeta_X))
b = EXP(INTERCEEPTII(LN(Deetaa_Y);Deetaa_X))
Humna dadhabii qixxaatoo
a = SLOOPEII(LN(Deetaa_Y);LN(Deetaa_X))
b = EXP(INTERCEEPTII(LN(Deetaa_Y);LN(Deetaa_X))
Sorooroo dadhabbiin polonoomialii qixxaatoo
Title is: Adeemsa sarara